के के न होला भन्ठानेको त ? | मझेरी डट कम
[email protected] — Thu, 03/07/2013 - 08:45
बेलुकी त्यो अँध्यारो रातमा लड़िबदी म बस्ने मेरो महलमा पुगे जस्तो लागेको थियो । मेरो महल जहाँ पुरानो सुकुल बिछ्याइएको काठको खात मात्रै देखिन्थ्यो तर आज नरम ओछ्यानमा पल्टिए झैँ लागिरहेथ्यो । मेरो महलको छानो ताराहरूले भरिभराउ थियो । त्यसैले होला रात अँध्यारो भएपनि मेरो महल भने जगमन्न थियो । अनि म ती ताराहरूलाई मेरो महल उज्यालो बनाइदिएकोमा हात जोडेर धन्यबाद दिंदै थिएँ । तर जवाफ भने फर्केको थिएन सायद ती ताराहरूले मेरा अप्रस्त बोली नबुझेका होलान्‌, कति नै पिएको थिएँ र ?
अचानक मलाई फनफनी घुमायो, पल्टिन नसकेर उठ्न खोज्छु तर सकिन । बल सबै झोलले पिइसकेको थियो । हे प्रभु, हे राम नाम लिएँ अहँ असम्भव ।
अचानक फेरि त्यति राति घोडा दगुरेको आवाजले जिउं सिरिंग बनायो । नजिकै टाँगा रोकिएको जस्तो भाव भयो । केवल आवाज मात्रै सुनिने, केही नदेखिने । एकछिन त झोल कम भएको जस्तो लागेको थियो तर खै न बढी भएको पो थियो कि ? ठाम्याउन गार्हो भएको थियो ।
पाउजुको आवाज सुनियो । केवल आवाज नजिकियो दृश्य भने थिएन । जाडोले थियो कि केले थियो ? जिउं कामि राखेको थियो ।
ओहो मिठो बासना, अब भने ब्रमाण्डनै भुले झैँ भयो, हावामा उडे झैँ भयो जब नरम हातको जस्तो लाग्ने स्पर्श निधारमा परे जस्तो भयो । आफ्नै तालले को हो ? को हो ? भनि सोधेँ ? आकासवाणी भए जस्तो सुमधुर स्वर सुनीयो ''म सुवासनी'' । कान पनि कान नै हो मेरो सुवासनीलाई स्वास्नी सुनेर झन्दै माया पिरती गाँस्न पुगेको । यति राति सुनसान ठाउँमा को होलिन्यि नी सोचेर फेरि मेरो जिउं काम्न सुरु भयो, ब्रमाण्ड फेरि भुले झैँ भयो, डरले ।
तिनीले अब जाऔँ भनिन्‌अनि हात समाएर मलाई उठाईन, म फेरि ढलमल गर्दै उनलाई साथ दिई उनको पछि लागेँ ।
अब भने बल्ल प्रस्ट हुँदै थियो । त्यो सुरुको ताप घोडा नभई राँगोको थियो । सुवासनीलाई हेरेँ, यमराज
जस्तो देखिन्थ्यो । कुनै संका नै थिएन, फिलिममा देखिए जस्तै गरी पहिरन थियो । यति के सोचेको थिएँ, प्रभु यमराजले ल हिड भनेर अब त घोक्राऊन पो थाल्नु भो ।
झसँग भएँ र बिउंझिएँ । म त मेरो घरको कौसीमा राखेको सुकुलमा पल्टिरहेको पो रहेछु । के के न होला भन्ठानेको त सपना पो रहेछ । टाउको चाही हल्का दुखेको जस्तो भयो । साँच्चै बढी नै पिएछु । धन्न यमराजले लान भ्याएनन्‌ ।